Tsy Hita An-tserasera Ny Fiarahamonina Afrika Atsimon’i Sahara Sasany. Te-hanova Izany Ny ‘Kumusha Takes Wiki’ · Global Voices teny Malagasy
Tsy Hita An-tserasera Ny Fiarahamonina Afrika Atsimon'i Sahara Sasany. Te-hanova Izany Ny ‘Kumusha Takes Wiki’
Voadika ny 19 Jolay 2014 3:07 GMT
Kumusha Takes Wiki avy amin'ny WikiAfrica (CC-BY-SA 3.0)
Maro ny vatomisakana mahazo ny olona aty Afrika atsimon'i Sahara raha te-hiserasera an'aterineto. Na dia eo aza ny fandrosoana sasantsasany, dia mbola tratra aoriana eo amin'ny fidirana internet ny faritra noho ny fahalafosan'ny servisy sy ny fahakelezan'ny foto-drafitrasa, araka ny tatitra vao haingana nataon'ny World Economic Forum. Izany hantsana nomerika izany dia midika fa tsy voasolotena araka ny tokony ho izy ny fiarahamonina afrikana sasantsasany eto amin'ny siniben-tserasera. Raha tsy misy ny fivelarana ara-pisiana an-tserasera, dia mbola hiely tsy voasakatsakana ihany ny fahadisoam-baovao momba azy ireo. Tian'ny Kumusha Takes Wiki Project ny hanomezana feo ireo fiarahamonina ireo. Miasa handraisan'ny vahoaka Afrikana ny fizakamanana ara-pilazam-baovao ao amin'ny Wikipedia ny fisantaran'andraikitra hanatsarana ny fahazoan'ny vahiny ny momba ireo fiarahamonina ao an-toerana manerana an'i Afrika — sy hahatafiditra bebe kokoa ny kaontinanta ao anatin'ny siniben-tserasera. Ny voambolana “Kumusha” amin'ny fiteny Shona avy ao Zimbabwe dia midika hoe “toeram-piaviana.” Araka ny voalazan'ny tetikasa,
[Kumusha Takes Wiki] uses community journalism to gather community-relevant information on heritage, culture, notable persons, geographical features, among other things. It gives each community an online presence that is ‘owned’ by the community […] and it adds immeasurably to the understanding of Africa to every human being on the planet.
Mampiasa ny fikambanan'ny mpanoratra gazety ny [Kumusha Takes Wiki] hanangonana ny vaovao misogadina ao amin'ny fiaraha-monina momba ny vakoka, kolontsaina, olo-manandanja, songadina ara-jeografika, ankoatra ny hafa tsy voatanisa. Manome fijoroana an-tserasera ho an'ny fiarahamonina tsirairay izany, izay ‘an'ny’ fiarahamonina […] ary manampy amin'ny fomba tsy voarefy ny fahatakarana an'i Afrika ao amin'ny olombelona tsirairay eto amin'ny planeta.
Ny ankamaroan'ny fampafantarana azo raisina momba ny fiarahamonina ao an-toerana dia voafaritra fotsiny amin'ny teny sy fitenim-paritra manokana. Na dia efa vonona aza ny Wikipedia ho an'ny fiteny Afrikana maro ao an-toerana, izay ahitana ny Swahili, Yoruba, Zulu ary Afrikaans, dia tsy mivelatra ireo kinova ireo noho ny fahavitsian'ny mpandray anjara. Izany no mahatonga filàna ny fampivelarana ny fahakingana sy fandrisihana eo amin'ny fikambanana (fiarahamonina) vaovao mijoro manerana ny kaontinanta.
Izy ity dia ao anatin'ny WikiAfrica lehibebe kokoa, izay “mampahery ny tsirairay sy ny fikambanana hanangana, hamelatra ary hanatsara ny votoaty momba an'i Afrika, ny tantarany, ny vahoaka ao aminy, ny fihavaozana ary ny zavamisy maro amin'izao vanim-potoana izao, ao amin'ny raki-pahalalàna ampiasaina indrindra manerantany, ny Wikipedia.”
Ny ivon-toerana Kumusha Takes Wiki amin'ny maha-“fameloma-maso” ny fiaraha-monina, dia niainga ho fitaratra tao amin'ny firenena roa dia : i Cote d'Ivoire sy i Uganda. Ao amin'ireo firenena roa nokinendry ireo, niasa niaraka tamin'ireo fikambanana (fiaraha-monina) isan-karazany ny Wikipediana monina ao an-toerana, tahaka ny fanjonoana sy ny fambolena, oniversite, mpanoratra sy tanàna amn-tsisintany, mampianatra azy ireo ny fomba fandraisana anjara sy ny fanitsiana (fanatevenana) ny Wikipedia momba ireo tontolo sy ny vakoka manodidina azy.
Ilay teraka tao Zimbabwe Isla Haddow-Flood dia mpitantana ny tetikasa Kumusha Takes Wiki, izay nandany ny androm-piainany teto Africa. Tamin'ny alalan'ny Skype no niresahan-dramatoa tamin'ny fa hiasa hanangana fampahafantarana mahasoa ny rehetra ny tetikasa — fa tsy ho an'ireo izay mandrafitra ny lahatsoratra fotsiny. Hatramin'izao dia maro ny fanamby, ary anatin'izany ny tsy fahampian'ny fandrakofan'ny finday sy ny fidirana Internet any amin'ny toerana lavitra, ary eo koa indraindray ny sakana avy amin'ny fiteny.
Ao anatin'ny fandraisana anjara ho fanitsiana ny fampahafantarana tsy marina ihany koa ny Africa Centre, izay iorenan'ny tetikasa, ary miasa amin'ny tetikasa hafa ho “famelomana indray ny fampafantarana fototra”, ahitana (fa tsy voafetra amin'ny):
Badilisha Poetry X-Change- sehatra fandraisam-peo poetika natokana ho amin'ny fahitana, fampirantiana sy fandraketana an-tahirinkevitra ireo feo manantantara sy ankehitriny avy eto Afrika tsy ireo olona avy ao aminy any Ampielezana.
Everyday African Urbanism – laboratoaram-pikarohana sy fidirana an-tsehatra manao izay hahatakarana sy hiditra an-tsehatra amin'ny fanamby ara-tsosialy sasany tena manindry an'i Afrika. Ny fikarohana amin'izao fotoana moa dia mifantoka amin'ny fanjariana ara-tsakafo any an-tanàna Afrikana Tatsimo.
Infecting the City – fetiben'ny zavakantom-bahoaka mamoaka ny zavakanto hivoaka amin'ny tantara tsangana (teàtira=teatra) sy rantin-tsary, mankany amin'ny tahaka kaominalin'ny tanànan'i Le Cap.
programan'i WikiAfrica hafa, ahitana WikiEntrepreneur, maodelim-pandraisana an-tanana mety amin'ny mozea afrikana, tranomboky, trano fampirantiana, trano fampitam-baovao ary oniversite (Afrikana) hifampizara fampahafantarana amin'i Wikipedia sy i WikiAfrıca Culture and Knowledge, izay miasa miaraka amin'ny mpanoratra, manampahaizana, mpanoratra gazety, mpampianatra ambony ary fikambanana mpitahiry hampivelatra ny Wikipedia ao amin'ny sahan'ny kolontsaina Afrikana.
Manantena, ireo tetikasa ireo rehefa miaraka, araka izay lazain'izy ireo ao amin'ny WikiAfrica fa “hizara ny fahalalany momba ny fiarahamonina sy ny fitiavany fatratra” ho an'izao tontolo izao.